YEYINTNGE(CANADA): Saturday, September 06
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 9/06/20140အကြံပြုခြင်း
ရခိုင်ပြည်နယ် အမ်းမြို့နယ် တောင်စောက် တရုတ်ရေနံတွန်းအားပေး စက်ရုံရှိ တရုတ် အလုပ်
သမား အဆောင် မီးရှို့မူနှင့် စွပ်စွဲ ဖမ်းဆီးခံထားရသူ မြန်မာ အလုပ်သမား ချင်းလူမျိုး (၁၇)
ဦးကို အမ်းမြို့နယ်တရားရုံးက နှစ်ရှည် ထောင်ဒဏ်များ အသီးသီးချမှတ်လိုက်သည်။
သူတို့အား ထောင်ချလိုက်သော ပုဒ်မမများမှာ မီးရှို့မူ ပုဒ်မ ၄၃၆၊ ပိုင်နက်ကျူးလွန်မူ ပုဒ်မ ၄၅၂ နှင့် အကျိုးဖျက်ဆီးမူ ပုဒ်မ ၄၂၇ တို့ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုအထဲမှ မင်းကို၊ မောင်ဇော်နဲ့ ငမဲတို့မှာ ဦးဆောင်သူများဖြစ်၍ ထောင် (၁၀) နှစ်စီ ချမှတ်လိုက်ကြောင်း၊ ကျန် ၁၄ ဦးကို (၆) နှစ်စီ ချလိုက်ကြောင်း အဆိုပါ ရဲတာဝန်ရှိသူက ဆိုသည်။
ယင်းအမူနှင့် ဆက်စပ်ပြီး မြန်မာ အလုပ်သမား ၁၇ ဦးကို ရဲက ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး တရားစွဲတင်ကာ အမ်းမြို့နယ်တရားရုံးက (၈) လအကြာ အမူကို ကြာနာ စစ်ဆေးခဲ့သည်။
အသွင်ကူးပြောင်းရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မိန့်ခွန်း
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စေတနာထားကြတဲ့ မိတ်ဆွေနိုင်ငံတွေဟာ မြန်မာ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို အကောင်းမြင်လွန်းနေကြတယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
စက်တင်ဘာ ၅ ရက်က ရန်ကုန်မြို့ ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ မိဆာကာဟိုတယ်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ “မြန်မာနိုင်ငံ အသွင်ကူပြောင်းရေးကာလ၏ စိန်ခေါ်မူများ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ဖွင့်ပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အခုလို ပြောလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
“အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလဆိုရင် ကျမတို့အပေါ်မှာ စေတနာထားတဲ့ မိတ်ဆွေနိုင်ငံတွေဟာ သိပ်ပြီးအကောင်းဘက်က မြင်ချင်ကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကျမက စိန်ခေါ်လိုက်တယ်ဆိုတာ အဖြစ်ကို အဖြစ်အတိုင်းမြင်ပြီး အခြေအနေတွေကို တကယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကို ပြောင်းလဲနိုင်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားကြပါဆိုတာ ဒီလိုစိန်ခေါ်မှုကို ပြောချင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီဟာက ကျမတို့ တဦးချင်း တဦးချင်းအတွက် စိန်ခေါ်မှုပါ။
ကျမတို့ မိတ်ဆွေနိုင်ငံအတွက် မဟုတ်ဘူး။ ကျမတို့ နိုင်ငံအတွက်၊ ကျမတို့နိုင်ငံအတွက်ဆိုတာ ကျမတို့ရဲ့ ပြည်သူပြည်သားတွေ အတွက်၊ ကျမတို့ ပြည်သူပြည်သားတွေဆိုတာ တဦးချင်း တဦးချင်းအတွက်ပဲ။”
တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု မရှိဘဲ ခိုင်မာတဲ့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး မရနိုင်ဘူးလို့လည်း ပြောသွားပါတယ်။
“တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးရှိဖို့က အဓိက ဖြစ်တယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ ကျမတို့ကနေပြီးတော့ ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ အသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက် နံပတ် ၁ လိုအပ်ချက်က တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပါ။ နံပတ် ၂ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတော့ တချို့က ဒါကို ကန့်ကွက်ကြတယ်။
ဘာဖြစ်လို့ နံပတ် ၂ က ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလဲ၊ နံပတ် ၁ က ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး မဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ ဒါလည်း ကျမ လက်တွေ့ကျကျကြည့်တာပါ။ တကယ်ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဟာ ရေရှည်ခံဖို့ဆိုရင် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု မရှိပဲနဲ့ မရပါဘူး။
ဘယ်လိုပဲ သဘောတူညီချက်တွေ ယူယူ၊ ဘယ်လိုပဲ သဘောတူညီချက်တွေ လက်မှတ်ထိုးထိုး၊ ဘယ်လိုပဲ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်တွေကို လက်မှတ်ထိုးထိုး တကယ်တော့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး မရှိရင် ဒီသဘောတူညီချက်တွေဟာ ဘယ်လောက်အထိ တည်မြဲမှာလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားစရာ ဖြစ်လာပြီ။ ”
ပြည်သူတွေ တဦးချင်းအနေနဲ့ အသွင်ကူးပြောင်းဖို့ လိုတယ်လို့လဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ထောက်ပြ ပြောဆိုသွားပါတယ်။
“အသွင်ကူးပြောင်းရေးမှာ အဓိကလိုအပ်ချက်က ဘာလဲဆိုတော့ ပြည်သူတွေဟာ မိမိတို့ တဦးချင်း တဦးချင်းဟာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အသွင်ကူးပြောင်းဖို့ စိတ်ဓာတ်ဖြစ်လာအောင်လို့ ကျမတို့ ပညာပေးတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ် စည်းရုံးတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဆော်သြတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒါလုပ်ဖို့ လိုမယ်ဆိုတာကို ကျမတို့ လက်ခံခဲ့တယ်။
ဒါကြောင့် ဘယ်လိုကိစ္စမျိုးပဲ လုပ်လုပ် ကျမတို့ ပြည်သူကို ချပြတယ်။
အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာ အကြာကြီးနေခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ နောက်ပြီးတော့ အာဏာရှင်အနေနဲ့ အကြာကြီး အုပ်စိုးခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များဟာ ပြည်သူတွေကို အထင်သေးတတ်ပါတယ်။
ပြည်သူတွေက နားမလည်လို့ ပြည်သူတွေဟာ ပြားပြားဝပ်နေတဲ့ စိတ်ဓာတ် ရှိလို့ နင်းပြားဟာ နင်းပြားပဲဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်မျိုးရှိလို့ အာဏာရှင် အစိုးရများဟာ တက်လာနိုင်တာ အကြာကြီး အုပ်ချုပ်နိုင်တာ၊ ဒါကြောင့်မို့လို့ ပြည်သူတွေထဲမှာ အင်အား မရှိဘူးဆိုတဲ့ အဲဒီအမြင်တွေ ရှိတတ်ပါတယ်။
ကျမက ဒီဟာကို တုံ့ပြန်တဲ့နေရာမှာဆိုရင် ချက်နိုင်ငံက ကျမတို့အများကြီးလေးစားခဲ့တဲ့ ဗာစကာ ဟာဗယ်လ် Václav Havel ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ The Power of the Powerless “အာဏာမရှိတဲ့ သူများရဲ့ အင်အား”ပေါ့။
အဲဒီလိုမျိုး ခဏခဏ သုံးခဲ့ပါတယ်။
ဒီအင်အားဟာ ရှိတယ်လို့ ကျမတို့ ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။”
ဒါတွေကတော့ ရန်ကုန်က အသွင်ကူးပြောင်းရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြားခဲ့တဲ့ မိန့်ခွန်းထဲက တချို့ကို ကောက်နုတ် တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။
အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲကို ဗေဒါအင်စတီကျုနှင့် ဂျာမနီနိုင်ငံအခြေစိုက် ပညာရေးအထူးပြု အဖွဲ့အစည်း တခုဖြစ်သည့် Konrad-Adennuer-Stiftung တို့ ပူးပေါင်း ကျင်းပနေတာဖြစ်ပြီး စက်တင်ဘာ ၅ နဲ့ ၆ ၂ရက် ပြုလုပ်မယ်လို့ သိရပါတယ်။
BAYDA Institute သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ( ၆၊ ၉ ၊ ၂၀၁၄ )
၅-၉-၂၀၁၄ နှင့် ၆-၉-၂-၁၄ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ MiCasa Hotal တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် နှင့် တိုင်းရင်းသားပါတီ (၁၁)ပါတီ၊ စုစုပေါင်း ၊နိုင်ငံရေးပါတီ (၁၂) ပါတီတို့တက်ရောက်ဆွေးနွေးသော
“ မြန်မာနိုင်ငံ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ”
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ဗေဒါအင်စတီကျုမှ တာဝန်ခံကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ ခေါင်းစဉ်သုံးခုဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြ သည်။
၁။ ပြည်ထောင်စုဥပဒေပြုစာရင်း၊ ပြည်နယ်ဥပဒေပြုစာရင်းနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ၊
၂။ လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်နှင့် စိန်ခေါ်မှုများ၊
၃။ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ၊
အဆိုပါ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် တက်ရောက်လာသူများမှ အောက်ပါအတိုင်း သဘောတူမှတ်ချက်ပြုခဲ့ ကြသည်။
၁။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးမည့် ပြည်ထောင်စုနှင့် ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးများ၏ ဥပဒေပြု အာဏာခွဲဝေသည့် ဇယားကို ပြင်ဆင်းခြင်းသည် လုပ်နည်းလုပ်ဟန်ကိစ္စသာဖြစ်ပြီး၊ ပြည်ထောင်စုဆိုင်ရာ၊ တိုင်းရင်းသားဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေးပြဿနာများကို ဖြေရှင်းခြင်းမဟုတ်သောကြောင့် နိုင်ငံရေးပြဿနာများကို ဖြေရှင်းနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။နိုင်ငံရေးပြဿနားများ၊ တိုင်းရင်းသားပြဿနာများ ဖြေရှင်းနိုင်ရန် နိုင်ငံရေးဆန်သော တွေ့ဆုံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းအဖြေရှာကာ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ညီလာခံကြိးပြုလုပ်ပြီး ပြည်ထောင်စုကို ပြည်ထောင်စု ယူနစ်ဘယ်နှစ်ခုဖြင့် တည်ဆောက်မည်ဟု ဦးစွာဆုံးဖြတ်ကာ ပြည်ထောင်စုနှင့် ပြည်နယ်ကြား အာဏာခွဲဝေမှု ကို ဆုံးဖြတ်ရမည်။ ထို့နောက်မှသာ ထိုဆုံးဖြတ်ထားသောအာဏာခွဲဝေမှုအပေါ်မူတည်၍ ပြည်ထောင်စုဥပဒေ ပြုစာရင်း၊ ပြည်ထောင်စုယူနစ်ဥပဒေပြုစာရင်း၊ ထပ်တူကျဥပဒေပြုစာရင်းကို ပညာရှင်များမှ ပြုစုသင့်သည်။
၂။ လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်သည် အစိုးရမှ တစ်ဖက်သတ်ပြုလုပ်နေသောကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးမအောင်မြင် နိုင်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးဗဟိုဌာန ( Myanmar Peace Centre - MPC ) သည် အစိုးရ လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သောကြောင့် အဆိုပါဗဟိုဌာနမှ ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင်များသည် သမ္မတ နှင့် အစိုးရ၏ အကျိုးဆောင်များဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်အတွက် ဘက်မလိုက် သော ကြားနေအဖွဲ့ သို့မဟုတ် ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးတော်ဆောင် လူပုဂ္ဂိုလ်ကို ကြားနေအဖွဲ့အဖြစ်ထားရှိသင့် ပါသည်။ လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်သည် အစိုးရ၏ နိုင်ငံရေးကစားကွက်တစ်ခုသာဖြစ်သည်ဟု မြင်ကြသည်။
၃။ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကို ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းသင့်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲကောင်မရှင်ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေကို ပြင်ဆင့်သင့် သည်။ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ပြည်ထောင်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ကြံခိုင်ရေးပါတီ ကို ဘက်လိုက်နေသည်။ တရားမျှတမှုမရှိ။
- ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲသော်လည်းကောင်း၊ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲသော်လည်းကောင်း၊ မဲဆန္ဒနယ် သုံးနယ်အနည်းဆုံးပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မှု မရှိသော နိုင်ငံရေးပါတီများ ဖျက်သိမ်းခံရမည်။ ဤအချက်ကို ပြင် ဆင်သင့်သည်။
- ပါတီတွေစုပြီး မမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေများ နှင့် နည်းဥပဒေများကို ပြင်ဆင်ရန်ဝိုင်း ၀န်းတောင်ဆိုသင့်သည်။
- ပီအာစနစ်ကို တက်ရောက်လာသည့် ပါတီတိုင်းက လုံးဝ လက်မခံပါ။
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည့် ပါတီများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
၃။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်
၅။ “၀” အမျိုးသားစည်းလုံး ညီညွတ်ရေးပါတီ
၆။ ကချင်အမျိုးသားများ ဒီမိုကရေစီကွန်ကရက်
၇။ တိုင်းလိုင်(ရှမ်းနီ) အမျိုးသားများ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၈။ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
၁၂။ ဇိုမီး ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
သတင်းထုတ်ပြန်ရေးဌာန (BAYDA Institute) ဖုန်း - ၀၉ ၃၁၀၅၈၇၄၇
လွန်ခဲ့သော ကိုးနှစ်ကျော်ကာလ၊ ၂၀၀၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၁ရက် ည ၁၁ နာရီ ဖြစ်သည်၊
ရှစ်မိုင် စစ်ရုံးသစ်ကြီး၏ အဆောင်( ၁ )အပေါ်ဆုံးထပ်ရှိ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေး
ဦးစီးချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမောင်အေး၏ ကပ်ရက် အခန်းထဲမှ ဒိုင်းကနဲပေါ်ထွက်
လာတဲ့ သေနတ်သံကြောင့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးစိုက်ရာ အဆောင် ( ၁ ) တစ်ခုလုံး
တွင် အလုပ်လုပ်နေသော အရာရှိစစ်သည်များ တုန်လှုပ်သွားသည်၊ အကြောင်းကလည်း
ရှိသည်၊ တပ်မတော်ထောက်လှမ်းရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ခုလုံးကို ဖြိုခွင်းထားသည်မှာ မကြာသေး
သဖြင့် မကျေနပ်သူတစ်ဥိီးဦးက တပ်ချုပ်ကိုဖြစ်စေ ဒုတပ်ချုပ်ကိုဖြစ်စေ လုပ်ကြံလိုက်လေ
သေနတ်သံကြားပြီးသည်နှင့် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမောင်အေးကို သူ့ကိုယ်ရေးအရာရှိ
ရုံးခန်းတွင် တွေ့လိုက်ကြရသည်၊ မြင်လိုက်ရသည်က ကိုယ်ရေးအရာရှိသည် အဆောင်
အယောင်သေနတ်ဖြစ်သော Colt ခြောက်လုံးပြူးသေနတ်ကို ပါးစပ်တွင်ငုံပြီး မောင်းခ
လုတ်ဆွဲကာ သူ့ကိုယ်သူသတ်သေသွားသည့် မြင်ကွင်းပင်ဖြစ်သည်၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး
မောင်အေးသည် သူ့တပည့် အလောင်းအနီးကုလားထိုင်တွင် ခြေပစ်လက်ပစ်ထိုင်လိုက်
ရင်း`` ဘာကြောင့် မင်းဒီလိုလုပ်လိုက်ရတာလဲ၊ဒီလိုလုပ်စရာလိုလို့လားကွာ၊ မင်းနဲ့ငါ
တွဲလာတာ ၁၇ နှစ် ရှိပါပြီ ´´ဆိုသည့် စကားများကို ရေရွတ်နေသည်ကို ရောက်လာသည့်
အဆောင် ( ၁ ) တွင်ပင် အခန်းချင်း မလှမ်းမကမ်းရှိသော တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး
ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသည် ကွမ်းစားရင်းတီဗီအကြည့်မပျက်သည်ကတော့ သွေးလေး
လွန်းသည်ခေါ်ရမည်လော၊ ထူးဆန်းသည်ဟု ခေါ်ရမည်လော မည်သူမှမသိနိုင်။
ဇာတ်လမ်းအစမှာ တပ်မတော်ထောက်လှမ်းရေးများကို ဖြိုခွင်းပြီးနောက် ယခုရန်ကုန်
ဟော်တယ်တည်ရှိရာ ရှစ်မိုင်ရှိ ထောက်လှမ်းရေးရုံးမှ လူကြီးများနှင့် ပတ်သတ်သည့်
ဖိုင်တွဲများကို ရှာဖွေပြီး ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေထံ ပို့ရသည်၊ ဤကိစ္စသည် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး
သန်းရွှေအတွက် သေရေးရှင်ရေးတမျှ အရေးကြီးနေသည်၊ ထောက်လှမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်
အချို့ကို အာဏာအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်း၊ စီးပွားရေးသောင်းကျန်းခြင်းဟုဆိုကာ ဖမ်းဆီး
ထောင်ချခဲ့သည်အတွက် ကျန်သည့်သူများရော မည်မျှကင်းရှင်းနေလို့လဲဟုဆိုကာ သူ၏
တပည့်များကို အမှုတွဲများ ပြင်ဆင်ခိုင်းထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေထံ ရောက်လာသော ဖိုင်တွဲများထဲမှ သူ့မိသားစုနှင့်ပတ်သတ်
သော ဖိုင်တွဲများမှာ မည်သူမှဖတ်ခွင့်မရလိုက်ပဲ အစဖျောက်လိုက်သော်လည်း
ကျန်သည့်တပ်မတော်လူကြီးများ၏ ဖိုင်တွဲများကိုမူ သူဖတ်ရှု့ပြီးသည်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ
လူကြီးများထံ ပေးပို့ခိုင်းသည်၊ ဖိုင်တွဲတစ်ခုသည်လည်း ဒုတ်ိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး
မောင်အေး လက်ဝယ်ရောက်လာသည်၊ ထိုဖိုင်တွင် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမောင်အေး
နှင့် ပတ်သတ်သည့်အတွင်းသတင်းများကို ဖော်ပြထားပြီး ထိုသတင်းများကို ကိုယ်ရေး
အရာရှိ၏ ဇနီးထံမှ ထောက်လှမ်းရေးက ရရှိကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ထို့အပြင် ကိုယ်ရေးအရာရှိဖြစ်သူ ဒုဗိုလ်မှူးကြီးက ကုန်သွယ်ရေးမူဝါဒကောင်စီ၏
ဆုံးဖြတ်ချက်များကို အစည်းအဝေး ပြီးလျှင်ပြီးချင်း တရုတ်ကုန်သည်များထံ အကြောင်း
ကြားခြင်း၊ နှစ်ပတ်တစ်ခါ ပြောင်းလဲသွားသည့် မူဝါဒကို ကြိုတင်သိခွင့်ရှိသော တရုတ်
ကုန်သည်များက စီးပွားရေးအရ အကျိုးအမြတ်များစွာရရှိခြင်းမှသည် ထိုစဉ်က တရား
မဝင်လုပ်ငန်းဖြစ်သော ဒေါ်လာအရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုံးကို သူ၏ကိုယ်ရေး
အရာရှိမှ ဦးဆောင်နေခြင်း၊တရားမဝင် ဒေါ်လာရောင်းဝယ်ရေးဈေးကွက်တွင် နေ့စဉ်
ပေါက်ဈေးသတ်မှတ်ပေးသူမှာ သူ၏ ကိုယ်ရေးအရာရှိဖြစ်နေကြောင်း ဖတ်လိုက်ရသည်။
ထိုအချိန်ရောက်မှ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးက သူ့အား ကုန်သွယ်ရေးမူဝါဒကောင်စီဥက္ကဌရာထူးက
ဖယ်ရှားလိုက်သည့် အကြောင်းအရင်းကို ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမောင်အေးတစ်ယောက်
ဖိုင်တွဲကို ဖတ်ရှု့ပြီး အလွန်စိတ်ဆိုးသွားသောကြောင့် သူ၏ ကိုယ်ရေးအရာရှိဖြစ်သူ
ဒုဗိုလ်မှူးကြီးကိုခေါ်ကာ`` ရော့ ... ဒီဖိုင်က မင်းနဲ့ပတ်သတ်နေတယ်၊ မင်းဟာ
မင်းဖတ်ပြီး ဆုံးဖြတ် ´´ဟု ပြောလိုက်သည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး၏ တွက်ကိန်းမှာ ဒုတပ်ချုပ်က သူ့တပည့်ကို ကာကွယ်လျှင် တစ်ခါတည်း
ရောပြီး အနားပေးရန်ဖြစ်သည်၊ တပ်ချုပ်သည် ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွှန့် အကူအညီဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်
မှူးကြီးစောမောင်ကို အာဏာသိမ်းခဲ့သလို သူ့ကိုတပ်ချုပ်ခန့်ရန် အမိန့်ပေးခဲ့သော
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းကိုလည်း နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဘဝဖြင့် ဘဝဇာတ်သိမ်းစေခဲ့သည်၊
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွှန့်နှင့် ထောက်လှမ်းရေးတစ်ဖွဲ့လုံကို ဖြိုခွဲလိုက်ချိန်တွင် သူ့အတွက်
ကြောက်စရာဟူ၍ တပ်မတော်ကို လက်ထဲတွင်ကိုင်ထားသော ဒုတပ်ချုပ်တစ်ယောက်
သာ ရှိတော့သည်၊ ထို့ကြောင့် ထောက်လှမ်းရေးနှင့် ရောပြီး ဒုတပ်ချုပ်ကိုပါရှင်းရန်
ဖိုင်ကို ဖတ်ပြီးသည်နှင့် ဒုဗိုလ်မှူးကြီး ခေါင်းငိုက်စိုက်ကျသွားသည်၊ ထိုစီးပွားရေး
လုပ်ငန်းအားလုံးကို သူနှင့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွှန့်၏ ကိုယ်ရေးအရာရှိတို့အပြင်
ထောက်လှမ်းရေးမှ အခြားဗိုလ်မှူးတစ်ဦးတို့ သုံးယောက်ပေါင်းလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် ဆရာသမား၏ သတင်းများသည်လည်း မိမိဇနီးထံမှ ပေါက်ကြားခဲ့သည်၊ သို့သော် ထောက်လှမ်းရေးရီပို့တွင်မိမိတစ်ဦးတည်းကိုသာ ဖော်ပြထားသည်၊ ထောက်
လှမ်းရေးများကို ကျူပင်ကျူငုတ်မကျန် ခုတ်နေသော အချိန်တွင် ဤဖိုင်ကြောင့် မိမိ
ဆရာသမားပါ ထိခိုက်တော့မည်၊ မိမိဆရာသမားကိုလည်း တစ်လက်စတည်းရောရှင်း
ရန် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ကြံစည်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်ကို စစ်ရုံးတွင် အနေကြာပြီဖြစ်သော
ဒုဗိုလ်မှူးကြီးက သဘောပေါက်လိုက်သည်၊ အဖြစ်မှန်ကလည်း သူတွေးသလိုပင်
သူ့အတွက်အဖြေက တစ်ခုတည်းသာရှိတော့သည်၊ ထို့ကြောင့် ညနေတွင် ဆရာသမား
ကို ခွင့်တောင်းပြီး အိမ်ပြန်သည်၊ သားသမီးများကို နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံရန်သွားခြင်း
ဖြစ်သည်၊ အိမ်တွင် ဇနီးဖြစ်သူကို ညစာစားမည် ပြောပြီးမှ မစားတော့ပဲ ရုံးသို့ ပြန်လာ
ခဲ့သည်၊ သူ့ဘဝအတွက် ပြင်မရတော့မည့် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချရသည်မှာ လွယ်ကူသော
ကိစ္စမဟုတ်ပါ၊ ညဖက်ရုံးတွင်ထိုင်ရင်း သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အပြန်ပြန်အလှန်လှန်စဉ်းစား
နေစဉ် ဗိုက်ကဆာလာသည်၊ ထို့ကြောင့် ရုံးခန်းထဲတွင်ရှိသော သူ့တပည့် တပ်ကြပ်ကြီး
`` ငါ့အတွက် ခေါက်ဆွဲပြုတ်လေး လုပ်ကွာ ´´
ဟုပြောရင်း သူ့လက်မှ တန်ဖိုးကြီးလက်ပတ်နာရီကို ချွတ်ကာ သူ့တပည့် လက်ထဲ
`` ရော့ ... ဒါမင်းဖို့ ငါ့ရဲ့ လက်ဆောင် ´´
ဟုပြောလိုက်သည်၊ တပည့်ဖြစ်သူမှာ ယနေ့အတွက် ဆရာဖြစ်သူ ထူးခြားနေသည်ကို
သတိပြုမိသော်လည်း သူ့ဆရာ၏ ဘဝဇာတ်သိမ်းခန်းရောက်နေသည်ကို မသိပဲ
ခေါက်ဆွဲပြုတ်ရန် အခန်းတွင်းဝင်သွားသည်၊ ထိုအချိန်တွင်ပင် သေနတ်သံကြောင့်
ပြေးထွက်လာချိန်တွင် သူ့ဆရာ၏ ဘဝဇာတ်သိမ်းခန်းကို မြင်တွေ့လိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်၊
စားပွဲပေါ်တွင်မူ တစ်ကြောင်းထဲရေးထားသည့် စာလေးတစ်စောင်ရှိပြီး
`` ဉာဏ်စိုး အားလုံသိပါတယ် ´´ ဟု ရေးထားသည်။
ညတွင်းချင်း အပြင်သို့ ထွက်ပေါ်လာသည့်သတင်းတစ်ခုကတော့ ဆရာတပည့်နှစ်
ယောက် စကားများပြီး အရက်မူးနေသည့် ဒုတပ်ချုပ်က သူ့တပည့်ကို ပစ်သတ်လိုက်
သည်ဟု ဖြစ်သည်၊ ထောက်လှမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို အရေးယူရန်ဖွဲ့စည်းပေးထား
သော ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရရွှေမန်း ခေါင်းဆောင်သည့် ၁၂ ဦးကော်မတီ အစည်းအဝေးတွင်
မူ အဆိုပါ ကိုယ်ရေးအရာရှိသည် အိမ်ထောင်ရေးပြဿနာကြောင့် သူ့ကိုယ်သူ အဆုံး
စီရင်ခြင်းဟု ကြေငြာကာ လူတစ်ယောက်၏ ဘဝဇာတ်သိမ်းပိုင်းကို သွေးအေးစွာဖြင့်
တပည့်ဖြစ်သူ အသက်နှင့် ရင်းသွားသဖြင့် ဒုတပ်ချုပ်ကြီးကို အနားယူရန် ကြံစည်ထား
သည့် အစီအမံလည်း ပျက်သွားခဲ့သလို နှစ်ဦးစလုံး တပ်မှအနားယူသည်အထိ
ဆက်ဆံရေးအေးခဲသွားကြောင်း၊ ဒုတပ်ချုပ်အနေဖြင့် အရက်ကိုသာ နေ့ညအဖော်ပြုရင်း
သူ၏တပ်မတော်အရာရှိဘဝနောက်ဆုံပိုင်းကို ဖြတ်သန်းသွားခဲ့ကြောင်းကို တပ်မတော်
အသိုင်းအဝိုင်းမှ အရာရှိကြီးများက မြင်တွေ့နေရသော်လည်း ဒုဗိုလ်မှူးကြီး၏ ဘဝ
ဇာတ်သိမ်းသွားရခြင်း ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုတော့ အများစုက ယနေ့အထိ မသိရှိခဲ့ကြပါ။
ဤဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပွားပြီး ထူးဆန်းသည့် အချက်နှစ်ချက်ကို တွေ့ သည်၊ ပထမအချက်မှာ
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး၏ ရုံးအဖွဲ့ဝင် အခြားအဆင့်လေးဦး တပ်မှ နုတ်ထွက်စာတင်ပြီး
ထွက်သွားခြင်းဖြစ်သည်၊ ဒုတိယအချက်မှာ မိမိကိုယ်ကို သေကြောင်းကြံခဲ့သောသူကို
တပ်တွင် ထုံးစံမရှိသော်လည်း စစ်အခမ်းအနားဖြင့် သဂြို င်္လ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်၊
အလားတူ `` ဉာဏ်စိုး အားလုံးသိတယ် ´´ ဆိုသည့် စာကလည်း ယခုအချိန်ထိ
နဂါးစောင့်စောင့် နတ်စောင့်စောင့် မပါမဖြစ်သော အဆင့်များ
ခေါင်းလောင်းကြီးဆယ်ယူရန်ကြိုးပမ်းနေကြခြင်းကို အဓိပ္ပါယ်မရှိ ခေါင်းလောင်းလည်း
တကယ်မရှိဟုတခါမှမပြောပါ။ ကျနော်တို့ အားမလိုအားမရြုဖစ်နေသည်မှာ
အင်ဂျင်နီယာများ၏တွက်ချက်မှုအစီအစဉ်များ စနစ်တကျမရှိပဲ ဂမ္ဘီရလိုလို
နဂါးတွေနတ်တွေ ကူညီနေသလို ရိုးသားမျှော်လင့်နေသောသူတွေကို
လျှောက်ပြောတာကိုလုံးဝလက် မခံနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤမျှလေးလံပြီး
မြစ်ကြမ်းပြင် ရွံ့နွံထဲ နှစ် ၄၀၀ မြုပ်နေသော ခေါင်းလောင်းကြီးကို ဆယ်ယူရန်
အတွက် ဖြစ်သင့်သော နည်းလမ်း (Method Statement)ကို ၂၀၁၂ က ကျနော်
သူငယ်ချင်း Civil Engineer ကိုနေမင်းဟိန်းက အင်ဂျင်နီယာ ညီလာခံမှာ
တင်ပြခဲ့ဘူးသည်။ စာမျက်နှာ (၃၀)ကျော် ရှည်လျားသော သူ၏အစီရင်ခံစာ
ထဲက ပုံ ( 11)ပုံလောက်ကို ကောက်နှုတ်ကာ မြန်မာလို သာမန်လူများနားလည်အောင်
ကျနော် ပြန်ရှင်းပြရေးပြပါမည်။ အစီအစဉ်အတိုင်းကြည့်စေချင်ပါသည်။ (၁၁)ပုံ ကုန်အောင်ကြည့်ပါ။
ဖြစ်နိုင်ခြေ (၂) ခုအနက် သဲနွံထဲမှာ မြုပ်နေဖို့က ပိုများပေရာ ရှိနိုင်သောနေရာကို
သတ္ထု ( metal) များကို detectလုပ်နိုင်သော ဘူမိရူပ အသံလှိုင်းပြန်ဖမ်းယူခြင်းနည်း
( Seismic sonic rador surveying) များဖြင့် နေရာကိုတိကျအောင်အရင်ရှာရမည်။
နေရာသေခြာသောအခါ ခေါင်းလောင်းအပေါ်ရှိ နံဘေးရှိ သဲများကို ဒီတိုင်း
သယ်မထုတ်နေလို့မရ။ (သည်မျှထူအောင်အုပ်နေသာ သဲများကိုကျော်ကာ
ခေါင်းလောင်းကိုယ်ထည်ကို ရေငုပ်သမား မည်သို့စမ်းမိသည် မသိပါ ။)
ဘောင်ခတ်မထားပါက သဲနှစ်များက ပြန်ကျ ပြန်အုပ်သွားမည်သာဖြစ်သဖြင့်
Temporary Cofferdam (Retaining walls/ sheet piles..etc )
များခတ်ကာ ပတ်ပတ်လည် ရှင်းသွားအောင် အရင် ခြစ်ထုတ်ရ (dredge) မည်။
ခြစ်ထုတ်ကလော်ယူလာသော သဲများကို dredging barge ဖြင့်သယ်ကာ ဝေးရာမှာ
သွားပြန်သွန်ချရမည်။ ကြိုးချည်နှောင်ရမည့်နေရာ hooks နှင့် ချည်နှောင်မည့်
(ဒါတောင် နောက်ကျိနေသောရေအောက်မှာ လုပ်ကြရမည်မှာ အလွန် ခက်ခဲပါလိမ့်မည်။
စင်ကာပူမှာကုန်းပေါ်မှာ သာမန် ၃-၄ တန် အလေးချိန်လေး ပစ္စည်းတင်ဖို့ကြိုးချည်ကြ
တာတောင်Lifting supervisor / safe work load..etc) တွေဘာတွေနှင့်
ရှုတ်ယှက်ခတ်နေသည်)ခေါင်းလောင်းကြီးမှာ ချည်စရာဆိုလို့ ထိပ်ကက
ကွင်းတခုသာရှိသည်။ ကိုယ်ထည်မှာ သိုင်းပတ်ချည်ရအောင် မြင်သာထင်သာ
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ကုန်းပေါ်မှာ မဟုတ်ပေ။ ထို (ပုစွန်တုပ်)ကွင်းသည်ပင်
ခေါင်းလောင်းကြီး တန် ၂၉၀ ဆိုသည်မှာ နည်းနည်းနောနောမဟုတ် ။ရှေးကသမိုင်းဆရာတွေ
ချဲ့ကားတာမဟုတ်ဘူးဆိုလျှင် လေယာဉ်တစီးစာလောက်လေးနေပြီ။ ပြီးမှ လေဘူဘောင်းများ
တပ်ဆင်ထားသော ဖောင်ပေါ်သို့ အလေးချိန်အသေအချာတွက်ထားသော ကရိန်းဖြင့်မတင်ရနည်။
ပြီးမှ ကုန်းပေါ်သို့သယ်ရမည်။ ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်း ကမ်းနားလမ်းတို့က အလေးချိန် ခံနိုင်ရဲ့လားတွေးရဦးမည်။
ရျွေတိဂုံရင်ပြင်ရောက်သည်အထိ ရထားလမ်းသီးသန့်ဖောက်ရမည်။ .ခုပြောသည်မှာ မပါမဖြစ်သော
အဆင့်များကို အကြမ်းတင်ပြခြင်းဖြစ်သည်.။ အသေးစိတ်တွက်ချက်မှု များစွာလိုအပ်သည်။
မဟုတ်ပါက လမ်းတွင် နောက်တခါ ပြန်ပြုတ်ကျ ဒုက္ခများဘွယ်ရာရှိပေသည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 9/06/2014 1 အကြံပြုခြင်း
မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်း ရှိတ်ဟာမစ်အာလ်ဘာ နှင့်အဖွဲ့ စစ်တွေ လူမှုအဖွဲအစည်းဝင်တို့နှင့်
၃. ၉. ၂၀၁၄ နေ့ နေ့လည် ၂း၃၀ နာရီတွင် ECC ခန်းမ၌ တွေ့ဆုံ ။ တွေ့ဆုံပွဲရောက်မှ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ OIC အထူးကိုယ်စားလှယ်မှန်းသိရ ။
ဗိုလ်မှူးကြီး ထိန်လင်း ( နယ် / လုံ ၀န်ကြီး )
ECC မူဝါဒများကို ရှင်းပြ။
ပဋိပက္ခလွန်ကာလတွင် ဒေသခံရခိုင်တိုင်းရင်းသားများသည် UN , INGO နှင့် OIC အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ရပ်အပေါ် သံသယစိတ်များ ၊ စိုးရိမ်စိတ်များ ဖြစ်ပေါ်လာရ။
ဦးလှသိန်း ( ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ် )
လက်ရှိ ဖြစ်ပျက်နေမှု နှင့် အစိုးရ၏ စီမံဆောင်ရွက်နေမှုများကို နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနများမှ ထုတ်ပြန်မှုများသည် Negative သဘောဆောင်ပြီး ၊ ဖြစ်ရပ်မှန်များနှင့် များစွာကွဲလွဲမှု ရှိသည် ။
သတပ်းမှားများကို မယုံကြည်၍ လူကိုယ်တိုင် လာရောက် လေ့လာကြည့်ရှုခြင်းဖြစ်သည် ။ OIC အပေါ် Negative View ရှိကြသည်ကိုလည်း နားလည်ပါသည် ။ OIC အနေဖြင့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေးကို ၀င်ရောက်စွက်ဖက်မှုမရှိ ၊ စွက်ဖက်၍လည်းမရ ။ မြန်မာနိုင်ငံထဲတွင် မည်သည့်နေရာတွင်မျှ OIC ရုံးခွဲ ဖွင့်လှစ်ထားခြင်းမရှိ ။
ဦးသာပွင့် ( စစ်တွေ မြို့မိ မြို့ဖ )
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပျက်ဆုံးရှုံးခဲ့သည့် ဂီရိ ၊ နာဂစ် အစရှိသည့် ဆိုးဝါးသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနှင့်ဆုံတွေ့ခဲ့စဉ်က OIC အနေဖြင့် မည်ကဲ့သို့မျှ စိတ်ဝင်စားအကူအညီပေးမှုများ မတွေ့ခဲ့ရ ။ မူဆလင်တွေနဲ့ ပဋိပက္ခဖြစ်ပြီးမှ စ်ိတ်ဝင်တစား အကူအညီပေးရန် ရောက်ရှိလာမှုကိုထောက်ရှု၍ OIC သည် ဘာသာရေးကို အခြေမခံပါဟု ငြင်း၍မရနိုင်။
မြန်မာမူဆလင်အဖွဲ့ချုပ်မှ ဦးဝဏ္ဏရွှေ တို့ကတောင် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ဘင်္ဂလီမော်လ၀ီများသည်
ပါကစ္စတန်မှ လေ့ကျင့်မွေးထုတ်ပေးထားသော သဘောထားတင်းမာသည့် အစွန်းရောက်သူမျာဖြစ်ကြောင်း
ပြောထားချက်များရှိသည် ။ ယခုလို OIC ရောက်ရှိလာမှုသည် တည်ငြိမ်စပြုနေသည့် ရခိုင်ပြည်နယ်ကို အခြေအနေ ပြန်လည်ရှုတ်ထွေးလာနိုင်သလို တစ်ဘက်မှ မူစလင်ဘာသာဝင် ဘင်္ဂလီများကို မျှော်လင့်ချက်ပေး အားသစ်လောင်းသလို ဖြစ်ပေါ်စေသည် ။
ဦးသန်းထွန်း ( စစ်တွေ မြို့မိ မြို့ဖ )
မလေးရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းဆို၍သာ လာရောက်တွေ့ဆုံခြင်းဖြစ် ။ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ OIC ကိုယ်စားလှယ်မှန်းသာ သိခဲ့လျင် မိမိတို့ ရခိုင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းက လာရောက်တွေ့ဆုံလိမ့်မည်မဟုတ် ။
ပြည်ထောင်စုအစိုးရအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးအရ OIC အဖွဲ့ကို ၀င်ရောက်ခွင့် တွေ့ဆုံခွင့်ပေးသော်လည်း မြန်မာပြည်သူလူထု တစ်ခုလုံးနီးပါးက ယခုလို အစ္စလမ်ဘာသာဝင်များနှင့် ထိပ်တိုက်တွေ့နေကြချိန်တွင် OIC ကို အလိုမရှိကြ ။ OIC အနေဖြင့် Two communities လူမှုအဖွဲ့အစည်း နှစ်ခုဟု မြင်သော်လည်း ၊ မိမိတို့ ရခိုင်ဘက်ကမူThree communities သုံးခုဟုမြင်သည် ။ ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ၊ နိုင်ငံသား/ပြု ဖြစ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိဘင်္ဂလီများ နှင့်
Illigal immigrants(or)settelers တရားမ၀င် ကျူးကျော်ခိုးဝင်နေထိုင်သူဘင်္ဂလီများ ဟူ၍ဖြစ်သည် ။
နိုင်ငံသား/ပြု များ နှင့် ရားမ၀င်ကျူးကျော်ခိုးဝင်သူများ ကွဲပြားအောင် စီစစ်နေသည့် ယခုလိုအချိန်မျိူးတွင်OIC လာရောက်ခြင်းသည် ကောင်းသောလက္ခဏာမဟုတ်၍ လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိပါ ။
ရခိုင်လူမှုအဖွဲ့အစည်း နှင့် အမျိုးသမီးကွန်ယက်မှ ကိုယ်စားလှယ်များလည်း တက်ရောက် ဆွေးနွေးပြောဆိုမှုများ ရှိကြသည် ။
(နိရဉ္စရာ- ၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၄)